News - Olee otu esi achọpụta ụdị kachasị ngwa ngwa?
Ka ị na-aga njem gị nke ịzụlite na iweta ngwaahịa ọhụrụ n'ahịa, ị nwere ọtụtụ mkpebi ị ga-eme mgbe ị na-ebute prototyping - ma ị ga-ebido ngwaike ma ọ bụ ngwaahịa ngwanrọ, ma ọ bụ njikọta nke abụọ. ị kwesịrị inwe a prototype mere.
Mgbe ị mechara tọọ ntọala maka usoro mmepe wee mezie gị ụdị CAD, ị rutere na nhọrọ ọzọ. Tupu ị na-eme ụdị ihe ị mepụtara, ị kwesịrị ikpebi ụdị ụdị ụdị ị ga-arụ. Ma ị na-eme ya n’onwe gị ma ọ bụ na ị na-ego ụlọ ọrụ ngwangwa prototyping, ị kwesịrị ịmara nzube gị prototype ga-emezu n’ihi na ọ ga-enyere aka ịhọrọ ụzọ kwesịrị ekwesị, usoro, na ihe maka iwulite. N'iburu nke ahụ n'uche, ka anyị gabiga ụdị prototypes na ebumnuche dị iche iche na-ewu ha.
Dị a na-ejikarị dị ka ihe nnọchianya dị mfe nke echiche ngwaahịa gị, iji tụọ akụkụ anụ ahụ ma hụ ọdịdị ya siri ike. Ọ bara uru karịsịa maka ịme ụdị ụdị anụ ahụ dị mgbagwoju anya na nnukwu ngwaahịa na-enweghị itinye ego buru ibu site na mmalite. Mockup zuru oke maka nyocha ahịa mbụ na ụdị dị iche iche nke nnwale mbụ.
A na-ewu ụdị a mgbe ịchọrọ iji kwado echiche gị ma gosipụta na enwere ike ịghọta ya. Ọ na-abata uru mgbe ị na-abịakwute ndị mmekọ na ndị nwere ego.
A na-akpọkwa ụdị ihe atụ a "anya- na-arụ ọrụ dị ka" ihe atụ n'ihi na ọ nwere ma teknuzu na visual atụmatụ nke ngwaahịa ọkọnọ. A na-eji ya maka ule ọrụ ngwaahịa, na-eduzi nyocha ndị ahịa, yana mkpọsa ịchọta ego.
-Dị mmepụta ihe
Nke a bụ ụdị mgbagwoju anya kachasị dị na ọkwa kachasị ọhụrụ nke mmepe ngwaahịa. A na-eji ya maka ergonomics, nrụpụta, na nnwale ihe onwunwe, yana iwelata ihe egwu dị na ntụpọ n'oge nrụpụta. Nke a bụ ihe nlereanya nke ndị na-emepụta na-eji emepụta ngwaahịa ikpeazụ.
Họrọ Onye Mmekọ na tlọ Ọrụ Prototyping
Ọ dị mkpa iburu n’uche na ịkọ akụkọ bụ usoro ịgbagharị. Ọ bụ njikọta nke nka na sayensị na-enyere gị aka ikpughere ikike nke ngwaahịa gị, nke n'aka nke ya na-eme ka o nwekwuo ohere maka ọganiihu ahịa. Yabụ, ị nwere ike ị gafere ọtụtụ ụdị mbido, n'ụdị ọ bụla na-achọkarị nsụgharị ole na ole iji nweta akụkụ nke ị setịpụrụ maka ụdị ahụ.
Usoro a na-achọkwa enyemaka nke ụlọ ọrụ na-ewulite prototypes ma ọ bụ nke otu ọkachamara mmepe ngwaahịa. Nwere ike ịmalite ịchọ otu mgbe ịmechara njakịrị ma ọ bụ akaebe mbụ nke echiche gị. A na-atụ aro ya n'ihi na ịmepụta ụdị ihe mgbagwoju anya na-egosi iji ihe ọkaibe, ntinye ihe na ihe ndị nwere ike ịbụ oke ọnụ ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya ịme na-enweghị netwọkụ nke ndị na-eweta ngwaahịa. Na mgbakwunye, nka na ahụmịhe na-arụ nnukwu ọrụ na ịmepụta ụdị ngosipụta dị mma. Na-ewere ihe atọ niile - akụrụngwa, ahụmịhe na nka - na akaụntụ, ọ bụ ihe amamihe dị na outsource gị prototyping mkpa ka a ọkachamara ụlọ ọrụ.
CNC Rapid Prototyping, Otito Prototyping na Manufacturing, CNC Prototyping, Ọrụ 3d Printing & Rapid Prototyping Services, Fast Prototyping, Otito Prototyping,